I-10 Imixholo yeeNtengiso zeNtengiso azinakho ukungahoyi | Martech Zone
At UMGID, sibona amawaka eentengiso kwaye sisebenzela izigidi ngaphezulu ngenyanga. Silanda umkhondo wentsebenzo yazo zonke iintengiso esizisebenzisayo kwaye sisebenza nabathengisi kunye nabapapashi ukuphucula imiyalezo. Ewe sineemfihlo esabelana ngazo kuphela nabathengi. Kodwa, kukwakho neendlela ezinkulu zemifanekiso esifuna ukwabelana ngazo nomntu wonke onomdla kuzo intengiso yokusebenza kwendalo, Sinethemba lokuzuza kumzi mveliso wonke.
Nazi iindlela ezili-10 eziphambili ezichaza intengiso yemveli ngoku:
UkuBalisa amaBali- Ukuthengisa imveliso kufuneka unike abantu ibali eliyimpumelelo. Bayakuphendula ngcono kumava kaJane okanye kaJeremy- umntu ofana nabo- kunodumo okanye usozigidi. Abantu banxibelelana kakuhle nomntu onempilo nemicimbi efanayo yobuhle, ubuchwepheshe obufanayo kunye neemfuno zekhaya, uhambo olufanayo kunye namaphupha obuhlobo. badibana kwi-intanethi. Xelela elo bali: Yongeza iifoto "zendlela yabo ekruqulayo ngaphambi kokuba badibane." Yabelana ngamagama ambalwa malunga nokuba kunzima kangakanani ukufumana umdlalo ogqibeleleyo namhlanje-ngokuhlwa okunesithukuthezi, ukutya okubandayo, izihlobo ezitshatileyo. Ukuchaza le mingeni ebalini kuya kunceda umfundi ukuba azazi yena kwaye ahambelane nentengiso.
Iibhlog kunye neeNkanyezi ze-Instagram- Oku kuyafana nentengiso yelizwi-ngomlomo, kodwa yeyakho kwiqela ekujoliswe kulo ozama ukufikelela kulo. Bavumele ukuba bakhuthaze umnikelo wakho, ube ligorha lentengiso yakho, kwaye umkhosi wabo wabalandeli uya kuba nawe. Oku akufani nokusebenzisa ngakumbi abaxhasi abadumileyo bendabuko. Ezi nkwenkwezi zikwi-Intanethi zinabalandeli babo abakujonga njengobuhlobo kunye nabo.
Ividiyo ilawula uPhakamileyo- Imfuno yemithombo yeendaba ebonakalayo iyenyuka. Isizathu salo mkhwa kukunyuka konxibelelwano lwe-Intanethi olungenazingcingo, ukuvumela abasebenzisi be-intanethi ngakumbi amathuba okujonga nokumamela iividiyo kwizixhobo zabo eziphathwayo Umxholo wevidiyo kukunyuka phezulu kuzo zonke iindlela ezinokubamba ingqalelo yomntu. Abantu banokuyibukela ngaphandle kwesandi (umz. Ukuhlala emgceni okanye kwiphilisi) okanye ukumamela ngelixa uqhuba imoto. Namhlanje wonke umntu ufuna ukufunda into okanye ukonwatyiswa ngexesha lokungasebenzi ngexesha lasemini. Umxholo wevidiyo uya kuba nomtsalane ngakumbi kubasebenzisi beselfowuni njengoko uphuhliso lwetekhnoloji yeselfowuni kunye neenkonzo zedatha zisanda.
I-infographics kunye nee-GIF zoopopayi zizixhobo ezinamandla- Isizathu sokusebenza kwabo kukuba babambe ingqalelo ngendlela enobuchule, enomtsalane kwaye eqondakala ngokulula. Kukwalula kakhulu ukwenza. Kukho imithombo emininzi yasimahla ekhoyo kwi-Intanethi ekunceda ukuba ufumane ulwazi ofuna ukubonisa. Umxholo osebenzisanayo uya kudlula kumaxesha abekiweyo kunye neendaba ezisebenza ngokufanelekileyo.
Umxholo wodliwanondlebe- Xa ubhala umxholo wakho, sebenzisa imibuzo enokuvela kubaphulaphuli bakho. Nika abantu iimpendulo ezivela kwingcali. Yiyiphi ingcali? Uyagqiba.
Iintengiso zeCent-Fun- Le yenye indlela eshushu abanye abathengisi abalahlekileyo ngayo. Abantu bakhathele ukuba serious. Ukonwaba akuyi kwenza bubi. Sebenzisa ii-memes zentsholongwane kunye nee-comics ukumela konke kodwa owona mxholo ubalulekileyo. Igcina abantu bekhululekile kwaye bonwabile. Ukuhlekisa kuhlala kuyinto elungileyo ukucofa kwaye wabelane nabanye.
Amaqhosha "Ngoku" Konke malunga nokonga ixesha kunye neempembelelo ezonelisayo, iqhinga elingaphantsi eligcina abasebenzisi bebandakanyekile nokuba abayamkeli. Abantu bathanda "ukuyithenga ngoku" kwaye "jonga ngoku" amaqhosha kuba bamema ukuthengwa okungenamthungo kwaye bathembisa amava okonwabisa.
Imibuzo - Olu hlobo lomxholo luyeyona nto inokwabiwa kakhulu kuFacebook kwisiqingatha sokuqala sika-2016 kwaye ibonelela ngokufowuna ngokugqibeleleyo. Ungaqala ngento elula njengesiqhagamshelo kwiwebhusayithi yakho, okanye mhlawumbi amakhonkco awenzelwe ngokwakho kwiingcebiso zemveliso.
Umxholo we-Episodic - Eli li "tikiti elishushu" lika-2016: Umxholo uqhekeziwe waba ngamacandelo kwaye unokusebenzisa imikhankaso yentengiso eyahlukeneyo. Ukufumana ulwazi okanye ukuzonwabisa kumacandelo kugcina abasebenzisi benomdla kwaye babuyele ngaphezulu kuba banomdla wokubona nokuva lonke uhlaziyo. Ukugcina ulwazi kunceda ukuqhuba kubaphulaphuli ababandakanyekayo ekuhambeni kwexesha kuba ulindelo lonyusa ukuthembeka komsebenzisi kunye nokuqina kwamava.
Intengiso yeNative Performance - Amashishini amaninzi nangakumbi ngoku asebenzisa intengiso yemveli ukufikelela kubathengi abanokubakho kwi-intanethi. I-MGID yenethiwekhi yentengiso ekhokelayo yemveli ehambisa iziphumo ezilungileyo kubapapashi, abathengisi kunye nabathengi. Imigaqo yethu esekwe kwintsebenzo iqinisekisa abapapashi umjelo wengeniso ngokuthe gabalala ngokufakwa kwemiyalezo exhasiweyo kwintetho engaphazamisi.
Funda ngakumbi malunga nokuFunyanwa kwabaTyeleli baMthonyama
Siyakukhuthaza ukuba ulinge ezi ntsingiselo zomxholo. Khetha ezo ziya kubonisa kakuhle imveliso yakho, uzixube xa kusengqiqweni, kwaye ulungiselele ukubukela inqanaba lokuzibandakanya kwakho liqhuma.
tags: ii-gifs zoopopayibloggerumxholo wentengisoumxholo wentengisoumxholo weepisodicintengiso yolonwaboAbathinteliinstagramumxholo wodliwanondlebeAmanani entengisoIiVidiyo zeNtengisomgidintengiso yemveliIndawo yentengiso yemveliintengiso yokusebenza kwendaloNgoku amaqhoshaImibuzoUkubalisa ibali